StumbleUpon inoenderera Kudyisa Yangu Blog | Martech Zone
StumbleUpon inoenderera nekupa Zvangu Blog
Chipiri, Mbudzi 18, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Manheru ano ndanga ndichiongorora mamwe masosi anoreva bhurogu yangu uye ini handina kukwanisa kubatsira asi kuona huwandu hunomira kupfuura chero humwe - StumbleUpon inotyaira traffic yakawanda kune yangu saiti! Kune akawanda mabhukumaki masaiti kunze kwewebhu, asi StumbleUpon ine iyo imwe nzira yehunyanzvi isina mumwe wevamwe - ivo vanopa zvinongedzo nehukama hwehukama.
Paunotakudza iyo StumbleUpon bhaa rekushandisa (izvo iwe zvachose unofanirwa), iwe kugumburwa pamasaiti uye uvape zvigumwe kumusoro kana zvigunwe pasi. Sezvo iwe uchigadzira nhoroondo, iwo masaiti ayo StumbleUpon anotumira iwe kune anotevera anoenderana zvichienderana nemukana wako wekuvapa zvigunwe kumusoro. Iyo inoshamisa maitiro ayo akangwara kwazvo.
Zvichida zvakanyanya kukosha kupfuura huwandu hwevashanyi vandinotumirwa neStumbleUpon inyaya yekuti inzvimbo yekurevera ine yakanyanya, yakaderera bounce rate! Vanenge hafu yevanhu vakatumirwa kune yangu saiti tinya kuburikidza kune imwe posvo kana peji pawebhusaiti. Icho chidimbu chakaderera kwazvo, chakaderera pane chero imwe saiti inoreva.
Kusiyana Slashdot, Digg, uye mamwe makuru enjini ekumaka, StumbleUpon ine "Midas touch", ichipa yako blog kana webhusaiti netraffic inozowana zvemukati Zvakakodzera zvichibva paprofile yavakagadzira pane zvinofarirwa nevasingade zvemuenzi wako.
Kutenda kukuru kune mumwe wevamwe vanotungamira vanonongedzera kuwebsite yangu, Bittbox. Ivo vatumira yakawanda traffic kubva mukuwedzera ini kune yavo blogroll kupfuura ini yandaizombokodzera kuvabatsira kunze. Kana iwe uri newbie kana ane ruzivo graphic muvhi, ive shuwa yekutarisa iyo Bittbox saiti uye kusaina kune kwavo feed. Iyo inoshamisa saiti ine yakadzama tutorials uye matani ekudownload
Cherechedzawo izvozvo Twitter iri kukwira kumusoro kwekutumira! Kana iwe usati wamisa Twitterfeed kana wedzera autoposting maitiro eblog rako kuti riiswe pa Twitter, unofanirwa kuzviita nhasi!
Yako 3 Min Vhidhiyo inogona kuhwina 50 ″ HDTV
Ndiri A ** hole?
Nov 19, 2008 pa9: 45AM
Pamusoro pekutumira ako mapeji kune aya masosi Tora nguva yekugumburwa kana Twitter nezve shamwari. Pasina kukumbira, ivo vanowanzo dzorera iyo nyasha, uye kune zvakawanda zvakavimbika kana mumwe munhu akataura nezvako, Retweets, Kugumburwa kana Diggs.
Nov 1, 2010 pa9: 26AM
Ini ndagara ndichibvunza chinangwa uye kukosha kwenzanga bookmark. Kunyangwe ini ndaona yakawedzera traffic kune yedu blog kubva kuStumbleUpon, ndinoshamiswa kuti vanhu vanoshandisa sevhisi.
Nov 1, 2010 pa9: 31AM
Ini handipokani @chuckgose. Ini ndinofunga vamwe vanhu vanongoerekana vakwevera kune akasiyana maturu. Kune boka rine nzara kune rimwe divi remasaiti aya, zvakadaro. Kana kutumira bhukumaki pano nepapo kunogona kutyaira akakodzera traffic, saka wadii?
Nov 1, 2010 pa10: 58AM
Rimwe rematambudziko nekushandisa kugumburwa asi kunyatsovimba nekurova kuti mangani acho anonyatsobatana newebsite yako? Ndakaona mashoma emasaiti angu achibuda nenhamba dzakakwenenzverwa dzakakwirira kubva mukugumburwa, katatu chero chinhu chinotungamira traffic, asi huwandu hwemashoko hunoramba hwakafanana. Avhareji yenguva pane saiti haina kunyatso shanduka chero. Ndoziva traffic irimumigwagwa, asi panguva imwecheteyo, zvinobatsira sei kana vanhu vakarova saiti vosiya munguva pfupi uye vasinganyatso enda kune mamwe mapeji ...
Ingori mimwe mifungo kuseri kwepfungwa dzangu, ndingafarire kunzwa kuti pfungwa dzako ndedzipi pairi 🙂